လူရွှင်တော်စံလင်း ရဲ့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ လိမ်လည်မှု တစ်ခုကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော် ချစ်စု – Shwe Likes
လူရွှင်တော်စံလင်း ရဲ့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ လိမ်လည်မှု တစ်ခုကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ လူရွှင်တော် ချစ်စု
ပရိသတ် ကြီးရေ ဒီကာလမှာ အားလုံးလိုလို အခက်အ ခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြ တ်ကျော် နေကြရတာပါနော်။ အချင်းချင်း အခက်အ ခဲဖြစ်နေတာကို တစ်ဖက် တစ်လမ်းကနေ ကူညီပေး ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်း တွေလ ည်း ရှိကြပါတယ်နော်။ ဒီလိုရှိကြေ ပမယ့်လည်း နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးတဲ့ သူကတော့ ရှိကြစြ မဲပါပဲနော်။
လူရွှင်တော် ပေါ်လေး ရဲ့သား ချစ်စု ကတော့ သူ့ဆီက ချေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံဆ ယ်သိန်းပြန်မပေးဘဲ ပတ်ရှောင်ေြ ပးနေတဲ့ လူရွှင်တော် စံလင်းရဲ့အကြောင်းေ တွကို ဖွင့်ချလိုက် ပါပြီနော်။ ” လူတိုင်းအဆ င်မပြေတာကို လက်ခံတယ်ငွေဆယ်သိန်းနီးပါး ချက်ခြင်းပြန်ေ ပးဖို့လ ည်းမပြောပါဘူး ဖုန်းလေးတော့ကိုင် အဆ က်အသွယ်လေးလုပ်ပြီး အကျိုးသင့်အကြောင်း သင့်လေးပြောပေါ့….
ပွဲတွေလ ည်းထွက် အလှူတွေေ တာင် လုပ်နေသေးတာပဲဗျာ… ကိုယ်ချင်းစာ တရားလေး ထားပြီး နည်းနည်းခြင်းဖဲ့ပေး တာေ တာင်ရတယ်… တကယ်အံ ဩတယ် ခင်ဗျားနားကခင်ဗျား တပည့်တွေကပါဝိုင်းလိမ်ပေးကြသေးတယ်… တရားကျဖို့အေ တာ်ကောင်းသဗျာ…. ယုံစားမိတဲ့ကျူ ပ်တို့အမှားပါ ပဲ ပြေးထား နေတိုင်း တင်ပေးမယ် အနုပညာသမားလို့ေြ ပာရမှာတောင်အတော် ရှက်စရာကော င်းတယ်….” လို့ အကြောင်းစုံ ကိုအကုန်ပြောပြထား ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်ကြီးကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
ပရိသတ္ ႀကီးေရ ဒီကာလမွာ အားလုံးလိုလို အခက္အ ခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ျဖ တ္ေက်ာ္ ေနၾကရတာပါေနာ္။ အခ်င္းခ်င္း အခက္အ ခဲျဖစ္ေနတာကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းကေန ကူညီေပး ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေကာင္း ေတြလ ည္း ရွိၾကပါတယ္ေနာ္။ ဒီလိုရွိၾကေ ပမယ့္လည္း ေနာက္ေက်ာကို ဓားနဲ႔ထိုးတဲ့ သူကေတာ့ ရွိၾကစၿ မဲပါပဲေနာ္။
လူ႐ႊင္ေတာ္ ေပၚေလး ရဲ႕သား ခ်စ္စု ကေတာ့ သူ႔ဆီက ေခ်းထားတဲ့ ပိုက္ဆံဆ ယ္သိန္းျပန္မေပးဘဲ ပတ္ေရွာင္ေျ ပးေနတဲ့ လူ႐ႊင္ေတာ္ စံလင္းရဲ႕အေၾကာင္းေ တြကို ဖြင့္ခ်လိုက္ ပါၿပီေနာ္။ ” လူတိုင္းအဆ င္မေျပတာကို လက္ခံတယ္ေငြဆယ္သိန္းနီးပါး ခ်က္ျခင္းျပန္ေ ပးဖို႔လ ည္းမေျပာပါဘူး ဖုန္းေလးေတာ့ကိုင္ အဆ က္အသြယ္ေလးလုပ္ၿပီး အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္း သင့္ေလးေျပာေပါ့….
ပြဲေတြလ ည္းထြက္ အလႉေတြေ တာင္ လုပ္ေနေသးတာပဲဗ်ာ… ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားေလး ထားၿပီး နည္းနည္းျခင္းဖဲ့ေပး တာေ တာင္ရတယ္… တကယ္အံ ဩတယ္ ခင္ဗ်ားနားကခင္ဗ်ား တပည့္ေတြကပါဝိုင္းလိမ္ေပးၾကေသးတယ္… တရားက်ဖို႔အေ တာ္ေကာင္းသဗ်ာ…. ယုံစားမိတဲ့က်ဴ ပ္တို႔အမွားပါ ပဲ ေျပးထား ေနတိုင္း တင္ေပးမယ္ အႏုပညာသမားလို႔ေျ ပာရမွာေတာင္အေတာ္ ရွက္စရာေကာ င္းတယ္….” လို႔ အေၾကာင္းစုံ ကိုအကုန္ေျပာျပထား ပါတယ္ေနာ္။ ဖတ္ရႈေပးတဲ့ပရိသတ္ႀကီးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။
မင်းတပ်မြို့လေးကို ဒုတိယအကြိမ် လိုအပ်တာတွေထပ်မံ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ထူးအယ်လင်း
ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)နဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ အဆိုတော်အေသင်ချိုဆွေ ပြန်လွတ်လာ